कहिलेकाहिँ बिजुली प्रसारणबिना नै करेन्टको झट्का महशुस हुन्छ ? यस्तो छ कारण | Himalaya Post
कहिलेकाहिँ बिजुली प्रसारणबिना नै करेन्टको झट्का महशुस हुन्छ ? यस्तो छ कारण
Posted by Himalaya Post | १६ भाद्र २०७८, बुधबार ११:०९ |
काठमाडौँ– हामीमध्ये धेरैले महशुस गरेको हुनुपर्छ, कहिलेकाहिँ हामीलाई विद्युत् अप्रसारित वस्तुबाट पनि एक्कासी करेन्ट लागेको महशुस हुन्छ र, हामी आत्तिन्छौ । के तपाईलाई पनि यस्तै महशुस भएको छ ? तर, नआत्तिनुस् वैज्ञानिकका अनुसार, यो शरीरको सामान्य प्रकृयामध्येकै एक हो ।
हो, करेन्ट विद्युतीय यन्त्रमा मात्रै नभई जतासुकै उपलब्ध हुन्छ । यसैगरि विभिन्न अध्ययन अनसन्धानले करेन्ट हाम्रो शरीरभित्र पनि रहने तथ्य पुष्टि गरेको छ । र, यसको महत्व पनि हाम्रो शरीरको लागि उत्तिकै रहेको छ ।
मानवीय शरीरमा रहने करेन्टले व्यक्तिलाई चल्न, सोच्न तथा महशुस गराउनका लागि सम्पुर्ण शरीर तथा मस्तिष्कलाई संकेत पठाउने कार्य गर्दछ ।
यसरी सञ्चित एवम् नियन्त्रित हुन्छन्, शरीरमा विद्युतीय करेन्ट
हाम्रो शरीरमा पाइने सोडियम, पोटाशियम, क्याल्सियम, तथा म्याग्नेशियमजस्ता तत्वमा एक विशिष्ट करेन्टको चार्ज रहेको हुन्छ । ‘आयन्स’ भनिने यी तत्व लगभग शरीरमा रहेका सम्पूर्ण कोषिकाहरुले करेन्ट प्रसारणको लागि उपयोग गर्न सक्छन् ।
कोषिका अन्र्तनिहित तत्वलाई यसकोे झिल्लीले बाहिरी वातावरणबाट सुरक्षित राखेको हुन्छ । लिपिडद्वारा निर्मित ती झिल्लीहरुले अवरोध खडा गर्ने भएकाले केहि पदार्थहरु मात्रै कोषिकाको आन्तरिक भागमा पुग्न सक्छन् । कोष झिल्लीको कार्य अणुहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्रै नभई यसले कोषमा करेन्ट प्रसारणमा समेत भुमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
बाँकी रहेका अन्य कोषहरु भने भित्र नै नेगेटिभ चार्ज भएर बसिरहेका हुन्छन्, जबकी बाह्य वातावरण भने पोजिटिभ चार्ज भएका हुन्छन् । यसरी केहि कोषभित्र र बाहिर रहेका पोजेटिभ तथा नेगेटिभ चार्जपनि आयन्सको असन्तुलनकै परिणाम हो । र, झिल्ली भित्र बाहिर नै आयन्स प्रसारित भएको खण्डमा कोषिकाले यस्तो ऊर्जा प्राप्त गर्छ । जसबाट करेन्ट उत्पन्न हुन्छ ।
कोषिकाले झिल्लीमा प्रसारित उक्त चार्ज उपकरणलाई कोषको सतहमा रहने र केहि विशिष्ट आयन्स प्रवाहका लागि बन्ने प्रोटिनको मद्दतले नियन्त्रण गर्छ । जुन प्रोटिनलाई ‘आइयन्स च्यानल’ पनि भनिन्छ । जब उक्त सेल उत्तेजित हुन्छ तब यसले पोजेटिभ आयन्स च्यानलको माध्यमबाट चार्जलाई प्रवशको अनुमति दिन्छ । यसपश्चात् सेलको भित्र फेरि सकरात्मक चार्ज अधिक मात्रामा हुन्छ जसले विद्युतीय करेन्टलाई ‘एक्शन पोटेन्सियल’ भनिने पल्समा परिणतको लागि संकेत दिन्छ ।
शरीरमा करेन्टको आवश्यकता किन पर्छ ?
हाम्रो शरीरले उचित गति, विचार तथा व्यवहारको लागि ‘एक्शन पोटेन्सियल’ को प्रयोग गर्दछ ।
यस्तै, शरीरमा प्रसारित हुने विद्युत् प्रवाहमा अवरोध देखिएको खण्डमा यसले व्यक्तिलाई बिरामी समेत पार्न सक्छ । जस्तोः उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा, मुटु धड्कनको लागि कोषिकाले विद्युतीय करेन्टहरु प्रसारण गर्नुपर्छ । जसकारण उचित समयमै मुटुका मांसपेशी खुम्चिने हुन्छ ।
चिकित्सकहरुले यी विद्युतीय पल्स(धड्कन)लाई ‘इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम’ या ‘ईसीजी’ मेशिनको सहायताले जाँच गर्छन् । यस्तै, अनियमित विद्युतीय करेन्ट प्रवाहले मुटुको मांसपेशीलाई सहि ढंगबाट खुम्चिनमा रोकावट समेत ल्याउँछ । परिणामः स्वरुप व्यक्तिमा हृदयघात हुने जोखिम रहन्छ । जसबाट पनि हाम्रो शरीरभित्र प्रसारित हुने करेन्ट हाम्रो निम्ति आवश्यक छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
Previousप्रधानमन्त्री देउवाद्वारा वृक्षरोपण अभियान शुभारम्भ
Nextकाठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा फोहोर उठाउन सुरु
जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु,आठ बिरामी
२६ जेष्ठ २०७६, आईतवार १२:४०
ओलीको ट्वीटप्रति प्रचण्डको आपत्ति, ट्वीटमा के थियो त्यस्तो ?
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार १४:०४
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १२:१८